Inbound Marketing Gburugburu | Martech Zone
Inbound Marketing Ecosystem
Wednesday, December 21, 2011 Wednesday, December 21, 2011 Douglas Karr
Ọnọdụ nke DK New Media bụ n'ụzọ dị ukwuu na ọ bụ ihe inbound ahịa gị n'ụlọnga. Okwu ahụ na-amasị anyị inbound marketing n'ihi na ọ na-emesi ike na anyị lekwasịrị anya na-adọta ndị na-eduga ma na-eme ka ha bụrụ ndị ahịa. Companieslọ ọrụ SEO na-elekwasịkarị anya n'ọkwá. Companieslọ ọrụ na-elekọta mmadụ na-elekwasịkarị anya na nnukwu ndị na-ege ntị. Ndị ụlọ ọrụ na-elekwasịkarị anya na imewe. Anyị lekwasịrị anya na nsonaazụ azụmaahịa… ma nwee ike iji SEO, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, email, ekwentị mkpanaaka, vidiyo, imewe ma ọ bụ atụmatụ ọ bụla na-eme ka atụmanya banye na ndu ma na - eduga ndị ahịa.
Nbanye ahịa nwere ike ịdị ka ahia jargon, ma m na-amasị okwu na ọ bụ iji tụnyere atụmatụ ahịa ọpụpụ. Ndị folks na Volinsky na-agba izu emebela ezigbo ihe omuma nke na egosi uzo ndi ozo nke uzo ahia ahia di nma:
Tags: inbound marketinginbound ahịa ohiainbound ahịa infographicinbound ahịa atụmatụ
Douglas Karr Wednesday, December 21, 2011 Wednesday, December 21, 2011
Amazon na Worldwa!
Onye Nyocha Akwukwo Akwukwo anyi weputara na 484% Ogologo Pịa-Site na Ọnụego
Dec 22, 2011 na 12:30 PM
Ahụrụ m infographic a n'anya! Ọ dabara na ntu ahụ n’isi. Ọ dị ka anyị na-ele azụmahịa anyị anya site na anya abụọ. Anyị nwere oghere ndị na-ahụ maka ọrịre nke na-elekwasị anya na dollar dị ala ma na-ebute usoro ahịa azụmaahịa anyị.
Mgbe ahụ ị nwere nke a "Marketing Ecosystem" lense -nke yiri ezigbo echiche nke olulu-ihe dị iche bụ na onye na-ere ahịa na-elekwasị anya na ntụgharị ntụgharị nke ọdịnaya edepụtara ma chọọ itinye ọdịnaya ebe ọ ga-enwe uru kachasị dị elu . Ya mere, anyị na-emepụta ụfọdụ ọdịnaya nwere arịrịọ sara mbara maka oyi akwa / oyi ikuku ahụ ma jiri nke nta nke nta nwekwuo nkọwa nke ọdịnaya anyị mepụtara ka anyị na-amụtakwu banyere onye na-eri ya, ka ha na-akwaga na etiti.
Nke ahụ bụ naanị usoro okwu nke foto a na-egbuke egbuke 🙂 Ọ na-ada ụda.